Recipe Strawberry Macaron (Fudud) Tallaabo-tallaabo ah - Kukiyada
Recipe Macaron Strawberry
Makaron strawberry ah oo jilicsan oo gudaha ku jilicsan, ku xoqan banaanka oo leh qadarka saxda ah ee dhadhanka strawberry
Waxaan qirayaa inaan ka baqay barashada sida loo sameeyo Macaron Faransiis ah laakiin markii aan bartay sida loo sameeyo, ma joojin kari waayey! Isla markiiba waa inaan sameeyaa nooca 'strawberry' maxaa yeelay wax kasta oo miro dhasha ayaa ku guuleysta buuggayga!
Waxaa jira qaabab fara badan oo aad ku heli karto dhadhankaas strawberry-ga ah ee macaroonadaada. Waxaan arkay dadka oo isticmaalaya miraha la kariyey ee la kariyey oo budo ah, ama waxaad u isticmaali kartaa miraha loo yaqaan 'strawberry' sida aan u isticmaalo karinta keega strawberry.
Waxaan u maleynayaa in waxa ugu fudud uguna habboon ee la isticmaali karo si aad u hesho dhadhan fiican oo 'strawberry' ah oo aad u hesho macaroon-kaaga 'strawberry' waa inaad isticmaasho emulsion strawberry . Kaliya tsp wuxuu ku darayaa tan oo dhadhan strawberry ah, midab casaan qafiif ah oo wanaagsan oo saameyn kuma yeelanayo isku dheelitirnaanta baytariga macaron.
Waa maxay Emulsion Strawberry?
Emulsion Strawberry asal ahaan waa dhadhan aad u urursan oo laga sameeyay maaddooyinka dabiiciga ah. Waxay leedahay dhadhan aad u xoog badan waxayna caadi ahaan qaadataa wax ka yar dhadhanka cuntadaada marka loo eego isticmaalka kelida.
Emulsion Strawberry wuxuu ku fiican yahay dhadhanka keega, dhaxanta, buuxinta, iyo inbadan. U adeegso meeshii laga soosaaray miraha loo yaqaan 'strawberry' si aad u siiso alaabada aad dubtay dhadhan adag iyo caraf udgoon. Emulsions ayaa ah xulashada doorbidayaasha xirfadleyda ah ee dhadhankooda gaarka ah iyo dhadhan aad u xoog badan.
Waad u beddeli kartaa emulsion-ka strawberry emulsion kasta oo waxaad sameyn kartaa dhadhan kasta oo aad jeceshahay!
Sida Loo Sameeyo Macaron Strawberry fudud
Si aad u sameysid macaron strawberry, waxaan ku bilaabaynaa cuntada macaronka aasaasiga ah . Hubso in dhammaan qalabkaaga, baaquli iyo kuuskuusku dhammaantood nadiif yihiin oo saliid la'aan yihiin ama ukuntaada cadaanku aysan karbaashi doonin.
Ka bilow qolka beedadka ukunta cad. Karbaash 30 ilbiriqsi ama wixii la mid ah illaa ay ka helayaan wax xunbo ah. Ku dar kareemkaaga dhalada iyo sonkorta. Ku sii wad karbaashidda karbaashyada sare 'STIFF'
Ka dib markaad hesho ukuntaada cadcad ee lagu dhufto STIFF iyo dhalaalaya dhalaalaya, horay u sii soco oo ku dar emulsion-kaaga strawberry.
sida loo akhriyo ounces miisaanka cuntada
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa soosaarida 'strawberry' haddii aadan qabin emulsion laakiin sidoo kale ku dar dhibic casaan midabaynta cuntada. Waxaan u adeegsaday 1 tsp of embolion emulsion looks kinda waxay umuuqataa dhiig daadanaya sawirkaan. Waxaa laga yaabaa inaan dib u fikirno midkan lol.
Si tartiib ah u wada qabooji sonkortaada budada ah iyo burka yicibta. Ka qaad oo iska tuur buro waaweyn. Kordhi mar labaad si aad u hubiso in wax walba si fiican laysugu dhafay.
Ku dar 1/3 oo ah isku darkaaga bur ah ukunta cad oo si tartiib ah isku laabi. Raac aniga video makaron fudud muuqaalo badan oo ku saabsan laalaabka si habboon.
Marka isku darkaagu uu noqdo mid isku dhafan, horay u soco oo ku dar waxyaabaha harsan ee hartay.
Si tartiib ah u laalaab ilaa ay baytarku kaga soo dhacdo xargaha oo waxaad ku sawiri kartaa sawirka 8 adoo aan kala go 'lahayn. Duufku waa inuu u qulqulaa sida dhagaxa.
Dhig baytarkaaga shandad tuubbo ah oo ay ku rakiban tahay # 14 caag wareegsan ka dibna ku tuubo warqad
Kadib markaan tijaabiyey fiidiyowgaygii ugu dambeeyay ee YouTube-ka, waxaan helay a macron silikoon derin shaqeeyaa si ka fiican waraaqda Kani waa gogosha aan adeegsaday.
Hubso inaad si toos ah iyo hoosba u haysatid boorsadaada dhuumaha intaad tuujinaysid si aad u hubiso in buskudyadu dhammaantood isku cabir yihiin oo goobo ku jiraan.
Markaad dhamaysid tuubooyinka, ku dhaji digsiga dhowr jeer miiska dushiisa si aad uga soo baxdo goobooyin kasta oo dusha sare ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa caday si aad u soo saarto xumbo kasta oo ka hooseysa dusha sare.
Haddii aad rabto inaad ku darsato xoogaa saydhin ah makaarooyinkaaga, hadda waa waqtigii la samayn lahaa. Kaliya ha u isticmaalin wax aad u culus sida rusheeyaha birta ah ama waxay ku dhex degi doonaan dusha sare ee makaanikadaada inta lagu jiro dubista.
Hadda u oggolow in buskudkaaga 'makroon' uu ku fadhiisto heerkulka qolka 30-60 daqiiqo illaa inta maqaar ka samaysmayo dusha sare oo aad taaban karto adigoon dareemin wax dheg dheg ah. Haddii aadan u oggolaan in makaahiirku yeesho maqaar, cagaha ma lahaan doonaan markay dubtaan.
Waxaan ku kariyaa makarafoonkeyga foornada 300ºF illaa 15 daqiiqo. Kukiyada waa in loo daayaa si ay si buuxda u qaboojiyaan ka hor inta aan la isku dayin in laga xoqo warqadda xoqitaanka. Hadday dheg dheg yihiin markaa kama dhammaanin dubista oo waa inaad xusuusataa inaad iyaga dubayso muddo dheer waqtiga soo socda.
Haddii aad dooneysid in makaahiirtaada 'strawberry' ay haysato buuxinta xabbad 'strawberry' ah waxaad ku buuxin kartaa dhimista strawberry. Waxa kale oo aad ku qasan kartaa xoogaa dhimista miraha loo yaqaan 'buttercream' iyo tuubada taas oo geynaysa xarunta.
Waxa kaliya ee haray ayaa ah inaad ka buuxiso macaronkaaga strawberry subagga oo u adeeg!
Muddo intee le'eg ayay macaronku soconayaan?
Makaroonadan waxay ku jiri doonaan qaboojiyaha 2-3 maalmood. Xaqiiqdii, waxaa lagugula talinayaa in makaarooyinka lagu keydiyo qaboojiyaha ugu yaraan 24 saacadood si loo hagaajiyo muuqaalka buskudka.
Waad qaboojin kartaa qolofta buskudka makaroon ee aan la buuxin. Iyaga dhalaal si aad ugu isticmaasho sida aad ugu baahan tahay ama haddii aad aniga oo kale tahay, waad iska fadhiisan doontaa oo waad cuni doontaa adiga oo aan eed lahayn haha!
sida loo sameeyo kareemo la kariyey oo xasilloon
Ma dooneysaa in badan oo makhaaro ah? Fiiri kuwan!
Shukulaatada Macaron Shukulaatada
Kukiyada yar yar ee dhadhanka badani waligood kama baxayaan qaabka! Iftiin iyo xoqan dibedda, jilicsan oo xanjo ku leh bartamaha. Midabee, dhadhamiya oo buuxi! Waxaan ku qurxiyey buskudkeyga waxoogaa rusheeyey ka hor inta aan dubin midab dheeri ah. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:shan iyo toban daqiiqado waqtiga nasashada:labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:1 saac 8 daqiiqado Kalori:kontonkcal
▢57 garaam (57 g) bur yicib
▢113 garaam (113 g) sonkorta budada ah
▢57 garaam (57 g) ukun cad
▢1/4 tsp (1/4 tsp) kareem ah dhalada
▢28 garaam (28 g) sonkorta
▢1 tsp (1 tsp) emulsion strawberry
▢16 ounces sonkorta granulated
▢8 ounces biyo
▢8 weyn ukun cad (8 wiqiyadood)
▢24 ounces subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢1 qaaddo shaaha rusheeyaha aan halista lahayn ikhtiyaari ah
▢Caarada dhuunta wareega ee dhexdhexaadka ah iyo bacda dhuumaha
▢derin dubista silikoon makaroon
Wixii makaron strawberry ah
Si tartiib ah u wada qabooji sonkorta budada ah iyo burka yicibta, laba jeer hadaan la isku darin.
Ku karbaash ukunta si ay u ahaato mid wasakh ah oo si tartiib ah ugu dar sonkorta iyo kareemka dhalada, adoo karbaashaya ilaa ay ka samaysmayaan dhalada dhalaalaya ee jilicsan.
Kudar emulsion miroodka miraha.
Isku laab meringue galay baytari. Isku laab spatula-kaaga hoosta baytarka iyo geesaha ka dibna kala goo bartamaha. Meerigaaga ayaa diyaar ah marka ay ka sameysato xarig ka baxsan miskaha iyo baytarka dejiya ayaa ku dhowaad ku milmaya dhammaan dariiqa ugu soo haray inta kale laakiin wali wuxuu ka tagayaa xoogaa khadka ah.
Ku rid xaashida waraaqaha ah xaashi saxankaaga. Biibiile wareegyo yaryar oo qiyaastii 1 'dhexroor ah. Adeegso shaashad haddii loo baahdo. Kudar rusheeyaha haddii aad rabto.
U oggolow in aad qallajiso, daboolka ka qaad inta qolof dusha sare ka samaysanayso. Qiyaastii 30 daqiiqo - 60 daqiiqo ama illaa filim qallalan uu ka soo baxayo dusha buskudka
Kari 300ºF ilaa 15 daqiiqo ama ilaa inta khafiif ah
Dusha sare ee shooladda, isku qas biyaha iyo sonkorta, dabool dabool oo isku kari karkar kuleylka dhexdhexaadka ah.
Daboolka ku hay dheriga illaa 3-4 daqiiqo oo keen si aad u hubiso in dhammaan gunta sonkorta ay milmayaan, haddii kale, sonkortaadu way heli kartaa mid xasaasi ah oo iska nadiifisa.
Daboolka ka qaad, si taxaddar leh u geli heerkulbeegga nacnaca oo sii wad karinta heer dhexdhexaad ah illaa sharoobada ay ka gaadhayso 240 ° F.
Marka xalka sonkorta uu gaaro qiyaastii 235 ° F, bilow inaad ku karbaasho ukunta cad xawaare sare. Ku dar milix ukunta cad.
Markay ukunta cadaanku gaadho meelaha ugu jilicsan jilibka, ku shub xalka sonkorta durdur joogto ah dusha cad cad intaad isku qasayso xawaare yar.
Sii wad karbaashida ukunta / sonkorta isku dar ah ilaa ay ka gaarto meelaha ugu adag. Waxaan ku daboolay weel weelkeyga ah xirmo baraf ah si aan uga caawiyo meringue inuu si dhaqso leh u qaboojiyo. Waxa kale oo aad ku qaboojin kartaa meringue adoo ka soo bixinaya baaquli oo ku ridaya qaboojiyaha 15 daqiiqo.
Marka meeriska la qaboojiyo, ku karbaash subagga jilicsan iyo vanilj ilaa iyo inta ay subaggu ka fudud yahay oo qalafsan yahay oo uusan mar dambe yeelanayn dhadhanka subagga.
Si loo tijaabiyo midnimada, u hur hal cookie iskuna day inaad ka saarto sariirta silikoonka. Haddii ay si fudud uga saarto, waa la dhammeeyaa. Haddii ay dhegto, waxay u baahan yihiin daqiiqad kale. Natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ka akhriso boostada iyo habka loo diyaariyo si looga fogaado khaladaadka guud. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. Cabbiraadaha mitirka (garaam) ayaa la heli karaa adiga oo gujinaya sanduuqa yar ee ka hooseeya maaddooyinka ku jira kaarka cuntada ee ku suntan 'metric' Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku yaal). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. Isku day inaad isticmaasho isla maaddooyinka ay ku baaqeyso cuntada. Haddii ay tahay inaad beddel sameyso, la soco in cuntada laga yaabo inaanay sidii hore u soo bixin. Waxaan isku dayaa inaan taxo bedelka meesha ay macquul tahay.
sida loo sameeyo digaagga keega dhalaalaya
keega ugu fiican ee loo isticmaalo fondant
keeg dhakhtarka keegga cuntada sida loo kariyo keeg cad